67 qof oo lagu dilay dagaal ka socda magaalada Marib
67 qof oo isugu jira fallaagada Yemen iyo ciidamada taabacsan dowladda ayaa lagu dilay xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Marib, sida ay wakaaladda wararka AFP Isniinta maanta ah ka soo xigatay ilo wareedyo dhanka militariga iyo kuwa caafimaadka.
Duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee isbahaysiga uu Sacudiga hoggaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxda ay Iran taageerto ee Xuuthiyiinta oo iyagu sii xoojiyay weerarka ay ku hayaan halkii ugu danbeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda.
Boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay ka dib markii ay xuutiyiintu soo cusbooneysiiyeen ololahooda dagaal ee ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee Marib.
Kooxdan fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara.
AFP ayaa ka soo xigatay sarkaal military oo aan lamagacaabin in isbahaysiga Sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhanka cirka ah 24-kii saac ee la soo dhaafay.